ဖျော်ဖြေရေးတော်လှန်ရေးမောင်းနှင်သည့်အဓိကနည်းပညာများကိုစစ်ဆေးရန် SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် Entertainment ကတော်လှန်ရေးမောင်းနှင် Key ကို Technologies ကစစ်ကြောရန်
SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် Entertainment ကတော်လှန်ရေးမောင်းနှင် Key ကို Technologies ကစစ်ကြောရန်
အောက်တိုဘာ 22 ပွဲစဉ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယာဉ်များ, စက်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်စီးကျွမ်းကျင်သူများကနှင့်ရောနှောထားသော Reality Entertainment က၏အနာဂတ်စစ်ကြောတော်မူမည်
White Plains, နယူးယော့ - ဇူလိုင်လ 26, 2018 - SMPTE®သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်မှု၏ရာစုနှစ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးထောက်ခံနှင့်သူ၏အဖွဲ့ဝင်ကမ္ဘာလုံးအထိချဲ့ထားပြီးအဖွဲ့အစည်း, ယနေ့ daylong များအတွက်အစီအစဉ်ကို lineup ထုတ်ပြန်ကြေညာ SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲ "ဟုအဆိုပါ Entertainment ကတော်လှန်ရေးမောင်းနှင်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကား, စက်ထောက်လှမ်းရေး, & ရောနှောထားသော Reality" ဒီအောက်တိုဘာ 22 ဖြစ်ရပ်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ Westin Bonaventure ဟိုတယ် & Suites မှာနေရာတစ်နေရာယူပါလိမ့်မယ် Los Angeles မြို့ ယင်းသို့ဦးဆောင် SMPTE 2018 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ (SMPTE 2018).
"တချို့ဒီဂရီစေရန်, SMPTE အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲ၏အတိတ်နှစ်အနည်းငယ်ဒီခေါင်းစဉ်များအတွက်အခြေခံတွေအများကြီးကိုတင်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်များ, တိုးတက်လာသောရုပ်ပုံ, တိုးတက်လာသောအသံနှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနာဂတ်အနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသင်ယူခြင်းအတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်မှလမ်းအပေါင်းတို့အရွယ်ရှိကြပါပြီ, "ဟုပြောသည် SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲသဘာပတိ မိုက်ကယ် Zink, Warner Bros. မှာနည်းပညာ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ "ဒီတစ်နှစ်ကယ့်ကိုသူတို့အပိုငျးပိုငျး၌ရှိသမျှသောကြာနှင့်ဤအန္တိမစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်အတူတကွသူတို့ကိုကိုထည့်လေ့မရှိ, လက်ရှိစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆန်းစစ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပါအဝင်အရေးပါသော In-ကားတစ်စီးနည်းပညာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးတိုးမီးမောင်းထိုးပြ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု, ဖန်နှင့် display ကိုနည်းပညာများကိုအဖြစ်ဆက်သွယ်မှု၌တည်၏။ "
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများ, စက်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ရောထွေးအဖြစ်မှန် - - သိသိသာသာအသွင်ပြောင်းများအတွက် mobility ကဏ္ဍ positioned ကြပါပြီ "ဒီနေ့ရဲ့ Tech မှ Will Drive ကိုအနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာပုံ" အမည်ရအဆိုပါနံနက် session တစ်ခုမျိုးစုံနည်းပညာများအတွက်မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုဘယ်လောက်လေ့လာစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး session တစ်ခု, လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက်ဟောကိန်းများလက်ရှိစျေးကွက်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသွားမှာပါနှင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အလားအလာရှိသောအခွင့်အလမ်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမိုဘိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အတွေ့အကြုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့။
Intel က အလိုအလျောက်ယာဉ်မောင်း Group မှအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်ဂလပ် Davis က ခေါင်းစဉ်ကတော့ပြောရမှာ, တင်ပြပါလိမ့်မယ် "ဟုအဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမနက်ဖြန်များအတွက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးယနေ့တွင်။ " သူကလမ်းအပေါ်လူ့အမှားလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်အသက်တာကိုကယ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယာဉ်များ၏အလားအလာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ထိုကဲ့သို့သောယာဉ်များစားသုံးသူ '' ထွေးပိုက်မယ့်ဧရာမသစ်ကိုခရီးသည်စီးပွားရေးမြင့်တက်လာပေးနဲ့, အလှည့်၌, စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲမှုနှင်ထုတ်မည်ကိုမည်သို့ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
အဆိုပါပြောရမှာအောက်ပါ "Applications ကို In-ကား Entertainment ကလောင်စာမူမည်ကိုဘယ်လိုတီထွင်ဆန်းသစ်အကြောင်းအရာ" ခေါင်းစဉ်အဲဒီ session ထိုနည်းတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များစားသုံးသူကလေးမွေးစားခြင်းမှပေါ်ထွက်လာသောအခွင့်အလမ်းများကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဟောပြောခရီးသည်သွားလာရင်းဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာလောင်ဖို့ ပို. အချိန်ရှိသည်သည့်အခါများတွင်ကားဖျော်ဖြေရေးများ၏ concept ကိုပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်လိမ့်မည်ကိုမည်သို့ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ မျက်နှာပြင် extension များအနေဖြင့်ရောထွေးလက်တွေ့ဘဝမှ - - အထူးသအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဒါကစာတမ်းဖတ်ပွဲ session တစ်ခုအကြောင်းအရာ application များအတွက်ဆန်းသစ်အတွေးအခေါ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ စစ်မှန်သောဘဝနမူနာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အနာဂတ်၏ In-ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများဆောင်ကြဉ်းတံ့သောအရာကိုသို့တစေ့တစောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါမွန်းလွဲပိုင်းအစီအစဉ်ကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခု session တစ်ခုပါရှိပါတယ်လိမ့်မည် "ဘယ်လိုဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge Tech မှ Will Power ကအနာဂတ်စားသုံးသူတွေ့ကြုံမှုများ။ " ဒီ session ကိုသစ်ကိုဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများအားဖွင့်အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးစားသုံးသူအတွေ့အကြုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အသုံးပြုပါလိမ့်မည်အားလုံးသော - speakers ဖန်နှင့် display ကိုနည်းပညာများ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အီလက်ထရောနစ်အတွက်တိုးတက်မှု, အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်ရုပ်အတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း biometric အာရုံခံကိရိယာ၏ Implementation ကိုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အသိပညာဝေမျှပါလိမ့်မယ် အနာဂတ်။
"ဒီတစ်နှစ်ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများ၏အနာဂတ်အပေါ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ထူးခြားကြွယ်ဝသောရှုထောင့်နှင့်အတူတက်ရောက်ပေးသွားမှာပါ" ဟုကဆိုသည် SMPTE ပညာရေးဒုတိယသမ္မတ ရစ်ချတ်ဝလေSundog မီဒီယာ Toolkit ကို၏စီအီးအို။ "ကျနော်တို့ကခြောမီဒီယာတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောဧရိယာဖြစ်လတံ့သော, အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တဦးဖုံးအုပ်နှင့်အလျင်အမြန်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အရေးကြီးသောထွန်းသစ်စစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းသို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားငါပေးမည်သူစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဗွေဆော်ကျွမ်းကျင်သူများ, အချို့တို့ကပူးပေါင်းခံရဖို့အခွင့်ထူးခံများမှာ! "
အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲ၏တစ်အကြိုက်ဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည် SMPTE နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာ၏တူးဖော်ရေးများအတွက်ကမ္ဘာ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖိုရမ်တစ်ခု။ စာတမ်းဖတ်ပွဲမှတ်ပုံတင်ရေးကို select လုပ်ပါအတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် SMPTE add-on တစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် stand-alone မှတ်ပုံတင်ရေးအဖြစ်လည်းကောင်း 2018 ညီလာခံ packages များ။ ကွန်ဖရမှတ်ပုံတင် packages များအဘို့အအစောပိုင်း-ငှက်နှုန်းထားများသြဂုတ်လ4ပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံး။
အဆိုပါ 2018 မှာ NAB ပြရန်, SMPTE Zink အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲအကွောငျးပွောရသော Podcast တခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ Podcast တခုကိုဒီနေရာမှာထုတ်လွှင့်စေခြင်းငှါ: soundcloud.com/smpteconnect/podcast-michael-zink-vice-president-of-technology-at-warner-bros/s-rI8z8။ ယင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုနှင့်မှတ်ပုံတင်မှာရရှိနိုင်ပါ smpte2018.org/symposium.html။ အကြောင်းကို complete သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE 2018 မှာရရှိနိုင် smpte2018.org.
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE မှာရရှိနိုင် smpte.org.
ကျော်ရာစုအဘို့, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society ရဲ့လူအ, ဒါမှမဟုတ် SMPTE ( "simp-Tee" အသံထွက်), ကို "talkies" ၏နိဒါန်းနှင့်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရန်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာများစွာကိုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု၏အသေးစိတျအထဲကခွဲထားခဲ့သည်ပါပြီ HD နှင့် UHD (4K, 8K) TV ကို။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက SMPTE တစ်ဦးအော်စကာလက်ခံရရှိခဲ့သည်® နှင့်မျိုးစုံသူဟာ Emmy® စက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ရွေ့လျားနေသည့်-ပုံရိပ်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်၎င်း၏အလုပ်အတွက်ဆုပေးပွဲ။ SMPTE အင်အားသုံးလက်ရှိယနေ့များမှာ 800 ထက်ပိုသောစံချိန်စံညွှန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များ, တီထွင်ခဲ့သည်။ SMPTE အချိန် Code ကို™နှင့်နေရာအနှံ့ SMPTE အရောင်ဘား၏နေကြသည်ရုံဥပမာနှစ်ခုကို™ SMPTE'' s ကိုမှတ်သားလောက်အလုပ်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုတိယရာစုထဲသို့ဝင်သကဲ့သို့ပင်, SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပုံဖော်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း IT- နှင့် IP-based Workflows သို့ထပ်မံတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအဖြစ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာစေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နေသည်။
SMPTE ရွေ့လျားမှုပုံရိပ်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမောင်းတဲ့သူနည်းပညာသမားတွေနဲ့ဖန်တီးမှုများတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, ဖန်တီးမှုများ, နည်းပညာသမား, သုတေသီများနှင့်ကျောင်းသားများအဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစတေနာ့ဝနျထမျးသူက၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်ယနေ့ 7,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမိုပါဝင်သည် SMPTE'' s ကိုစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးအစပျိုး။ ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကမိတ်ဖက် ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) connection SMPTE နှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးပံ့ပိုးကူညီသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE မှာရရှိနိုင် smpte.org/join.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/180726SMPTE.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE_Michael-Zink.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: မိုက်ကယ် Zink, SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲသဘာပတိ
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ အသံရေမှတ်နည်းပညာ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု မီဒီယာစံချိန်စံညွှန်းများ NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB16 nabshow SMPTE SMPTE 2018 စာတမ်းဖတ်ပွဲ 2018-07-26
ယခင်: သဟဇာတ CableOS ™ virtual Cable ကို Access ကိုနည်းပညာအဘို့အ Key ကိုမူပိုင်ခွင့်ချီးမြှင်
နောက်တစ်ခု: ဟောလိဝုဒ် Professional ကအသင်းမှဆုပေးပွဲ DaVinci အင်ဂျင်နီယာ Excellence သည် 15 ဖြေရှင်း